विराट कोहलीले मुम्बइ र हैदराबादका मुख्य बलरलाई भने ‘आइपिएल नखेल्नू’, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
विराट कोहलीले मुम्बइ र हैदराबादका मुख्य बलरलाई भने ‘आइपिएल नखेल्नू’
एजेन्सी। आइपिएलको मुखमा भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान विराट कोहलीले मुम्बइ इण्डियन्सका प्रमुख फास्ट बलर जसप्रित बुमराह र सनराइजर्स हैदराबादका प्रमुख फास्ट बलर भुवनेश्वर कुमारलाई आइपिएल नखेल्न भनेपछि हंगामा भएको छ । कोहलीको यो भनाइमा भारतीय टिमका सीमित ओभरका दोस्रो तहका कप्तान रोहित शर्माले कडा आपत्ति जनाएका छन् । रोहित शर्मा मुम्बइ इण्डियन्सका कप्तान हुन् जुन टिमका बुमराहलाई विराटले आइपिएल नखेल्न भनेका छन् ।
कोहलीले विश्वकपका लागि फिट रहन भन्दै भारतीय राष्ट्रिय टिमका फास्ट बलरलाई आइपिएल नखेल्न भनेका हुन् । कोहलीले हालै हैदराबादमा भएको प्रशासकहरुको बैठकमा यो प्रस्ताव राखे पनि आइपिएल फ्रेन्चाइजहरुले यो प्रस्ताव मान्ने सम्भावना भने नभएको भारतीय मिडियाले जनाएका छन् । कोहलीले सबै फास्ट बलर र विशेष गरेर भुवनेश्वर र बुमराहलाई आइपिएल नखेल्न भनेका थिए । तर, बीसीसीआइको बोर्ड बैठकमा पनि यसलाई कसैले समर्थन गरेनन् । बोर्डका अधिकारीले नै फ्रेन्चाइज यो प्रस्तावमा सहमत नहुने बताएका छन् ।
बैठकमा उपस्थित बीसीसीआइका एक शीर्ष अधिकारीको हवाला दिँदै ‘आज तक’ले लेखेको छ ‘आइपिएल २९ मार्चमा सुरु भएर ९ मेमा समाप्त हुनेछ । भारतले विश्वकपमा आफ्नो पहिलो खेल ५ जूनमा दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध खेल्दैछ । यी दुईको बीचमा १५ दिनको अन्तर छ । त्यसैले फास्ट बलरलाई पूरै आइपिएलमा विश्राम दिने सम्भावना निकै कम छ ।’ बैठकमा उपस्थित दोस्रो तहका कप्तान रोहित शर्माले समेत यसका आपत्ति जनाएका थिए ।
ती अधिकारीले भने ‘जब कोहलीले आफ्नो राय राखे त्यसपछि प्रशासकको समितिका प्रमुख विनोद रायले रोहितसँग उनको राय सोधे । रोहितले प्रस्ट भने कि यदि मुम्बइ इण्डियन्स प्लेअफमा पुग्छ र बुमराह फिट रहन्छन् भने उनलाई विश्राम दिन सकिँदैन ।’ बैठकमा उपस्थित एक अर्का अधिकारीले विराटको यो प्रस्तावलाई विचित्रको भनेका छन् । उनले विराटको प्रस्तावको उल्टो नतिजा पनि निस्कने खतरा औंल्याए किनकि यदि बलरलाई आइपिएलमा विश्राम दिइयो भने उनीहरु २ महिना अभ्यासबाट टाढा रहन्छन् जसले उनीहरुको प्रदर्शन झनै बिग्रन सक्छ ।